Iinkqubo zeBentley zenza ukuzibophelela okuqinileyo kwi-GIS ngokufumana i-Arhente9-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2018 Geospatial - GIS, ezintsha, Microstation-Bentley
2004 ukususela emva endleleni xa Bentley wajoyina XFM izinto zabo ezintsha V8i, Bentley weza ukudibanisa izakhono isithuba iiMviso Geographics siko ukuze Bentley Cadastre, PowerMap kunye BentleyMap. Nangona kunjalo, yayihlala iyitekhnoloji yobunjineli, ikwayi-geo nenqanaba eliphezulu lokuchaneka kwe-CAD ukuba iinjineli, abaphandi kunye nabayili bezakhiwo bafuna.
Kwabo basebenzise i-BentleyMap ukusukela oko yaqalwa nge-Geospatial Administrator, sasihlala sijonge xa ​​inyathelo elilandelayo linokubonwa. Kungolwaneliseko olukhulu ukuba iindaba zokuba i-Bentley Systems ifumene inkampani eyile iCityPlanner kunye ne-3DMaps ibonisa kuphela amandla anokuqokelelwa leli nyathelo lokuzalwa ngo-2003 eSweden, ukusuka kwiinguqulelo zokuqala zedatha yendawo yokubonwa kwezisombululo kunye nokudityaniswa. sisebenzisana nokhuphiswano oluphezulu namhlanje; lixesha apho amandla e-geospatial ekhule ngokukhululeka kuzo zombini ii-OpenSource nakwimihlaba yabucala.
Ngoku siyinxalenye ye-Bentley, siqinisekile ngokufikelela kubukho behlabathi kwi-Arhente entsha ye-9. -Hakan Engman, CEO ye-Arhente9.
I-Agency9 yayijolise ekuphunyezweni okubalulekileyo kwizixeko zaseNordic, indawo apho umgca weMicrostation wamkelwe kakuhle; Ndisenayo entsha i-BeAward ka-2004 e-Orlando, xa i-Helsinki Cadastre yenza ubuhle bayo kukhuphiswano kwicandelo loLawulo lweNdalo. Kukwabalulekile ukuqaphela ukuba ukumamela abasebenzisi ngokuqinisekileyo kube nefuthe kwamehlo kaBentley kwesi sisombululo siphunyezwe kwizixeko ezininzi eSweden, nesakhono sokudibanisa idatha yeefoto ze-Bentley ContextCapture.
Ziziphi iimveliso ezenziwa yiArhen9?
Ukuthetha malunga neemveliso kuthintelwe, kuthathelwa ingqalelo ukuba ezi azisoloko zibonakalisa ukubakho komqondo wobuchwephesha, ukongeza kwi-Arhente9 ibakhonze ngokwahlukeneyo nangona bebonke bemele ingqokelela efanayo ngoku esicinga ukuba iBentley izakudityaniswa ngokunqamlezayo kwiDijithali yamawele. Iinkonzo. Ukunika isampulu yoku, i-Arhente9 inezisombululo ezine ubuncinci ezinokubakho:
Ngokusekwe kwilifu, esi sisombululo sijolise kucwangciso lokusebenzisana. Ivumela ukubonwa ngedatha ye-2D, 3D kunye ne-GIS kwindawo enamacala amathathu. Ukuba iwebhu, ayithathi isikhangeli ukuze isebenze, nakwimo yokudala.
Umsi weSixekoPlanner unomjelo osebenzayo ogqithisileyo, njengoko isibonisi se3D sikhawuleza kakhulu nokuba ujongene nedatha enkulu. Yiyo loo nto ke imiba enje ngocwangciso lokusetyenziswa komhlaba inezinto ezininzi ezinokubakho, kuba inokubonakala omabini amacandelo eegeometri ezintsonkothileyo kwinqanaba lesizwe / lommandla, kunye neepasile zedolophu ezinenkcazo-ntathu.
Kwezinye iincwadi zam Akhawunti ye Twitter Ndayifaka njenge-vitamin Earth Google.
Okona kulungileyo, amandla okuhlela, ukukwazi ukulayisha i-CAD, i-BIM, i-3D, iimodeli zeraster okanye ukhuseleko lweenkonzo zewebhu. Eminye yemisebenzi esebenzayo isikhumbuza ngezenzo zomxholo we-OpenStreet Imephu yomhleli wewebhu, ngakumbi ngakumbi kunye nokusebenziseka okuxabisekileyo phantse-kodwa kungenjalo nakhona- ngokungathi sasidlala neCityVille. Inokusebenza ngokudibeneyo, ukuze amaqela asebenze ekuhambeni okulawulwayo ngokusekwe kwindima.
Le isethi ngevangeli, kunye SDK wakhe; ngokuba ekwakheni imifuziselo 3D nezibonelelo ephazamisayo photogrammetry kutshanje yathandwa ipatheni textured: DSM, Smart3DCapture, StreetFactory, PhotoScan, 360 imboniselo, imifanekiso elibhalwe ngokumileyo kunye neenkonzo nemigangatho OGC.
Esi sisibukeli sedatha yendawo ye-3D, ekwazi ukunxibelelana kwimowudi yokuhlela kwimeko ebonakalayo yedolophu ekuhlaleni okanye kwilifu, ngokukodwa okanye kwiibhetshi, ezineefomathi ezinje ngeCityGML, KMZ, Collada okanye i-SQL geometries. Ihlala iza ne-3DCityDatabase njengengagqibekanga.
Kuyathakazelisa ukuba ivumela ulawulo olusebenzayo lweejiyometri ezintsonkothileyo kunye nokuma, kunye nohlobo lwembali. Ilungele ukwakhiwa kwezixeko ezifanelekileyo.
Lo ngumphathi wedatha, ovumela ukulawulwa kwemithombo ngeefomathi ezahlukeneyo okanye iinkonzo. Phakathi kwezi zinto:
Iimodeli eziphezulu ze-DSM / DTM: GeoTiff, iifayile ze-ASCII
Imifanekiso e-Orthorectified okanye georeferenced: Geo-Tiff / JPG / PNG
Ukuqhafaza ngokufakela umfanekiso (PhotoMesh): Umxholo, I-PhotoScan, IMISEKO, I-StreetFactory, Rapid3D
Amafu okuma: I-LAS
Iijoloji zejiyometri: iipoligoni, imigca, amanqaku njengeenyawo, imithi, ifanitshala yezitalato, njl
Ngokuphathelele iinkonzo, ixhasa:
Umgangatho kwii-OGC ze-WCS
IiMephu kunye neeNkonzo zeTile kwiWMS, i-TMS, i-WMTS, i-Slippy
ISRI Image Image
Yaye yeyona nto ifanelekileyo, i-DigitalGlobe Image ImageService images
Ngale nto ifunyenweyo, i-Bentley ifumana amandla anomdla wokuqonda amawele ayo edijithali kwinqanaba ledolophu, kunye ne-CAD kunye ne-BIM enokubakho efunekayo ngakwindlela yoyilo olugcweleyo lwe-SmartCity.
Ngokumalunga nokufunyanwa kwe-Arhente9
I-Bentley yenza isimemezelo salolu phiko, kwi INgqungquthela Yengxelo Yonyaka, apho kunye ne-Topcon, i-Siemens kunye ne-Microsoft ibonisa ukuhamba kwe-Pavillion Alliance kwaye ivuze iiprojekthi ezintle eziye zaveliswa kummandla we-Geo-engineering.
Ukudityaniswa kwayo okukhuselekileyo kwangoko kuya kuba yiBentley's ContextCapture, njengomxholo wedijithali wokujonga ngeso lengqondo iiasethi zeziseko zophuhliso ezidolophini ezimelwe kwidatha ye-GIS, iimodeli zomhlaba kunye ne-BIM, eyakhiwe kwinkonzo yefu yeTwin ™, ethiwe thaca kwinkomfa. Ukubheja okunomdla, ngexesha laxa izigebenga zimbini i-ESRI kunye ne-AutoDesk zikumqolo njengabanye abakhuphisana nabo abakwenzela imeko ebonakalayo, ngendlela ye-GIS-CAD yezithintelo, ukuguquka kweBIM.
Kuya kuba kubalulekile kwi-BentleySystems ukwenza uhlengahlengiso olubanzi hayi kuphela ujongano, kodwa nakwimodeli ye-i, njengoko yenzile ngempumelelo nezinye izisombululo ezizifumeneyo. Oku kuya kuba ngumceli mngeni onamandla, ngakumbi kwindlela esiyibonayo; Apho izisombululo zeGIS ezikhuphisanayo zithathe ukufundwa ngokuchanekileyo kwendlela yewebhu, ngaphandle kokuba ibekwe ngempumelelo kwisoftware yedesktop, imeko apho ukufezekisa ibhalansi akufuneki kubelula, ngaphambi kokuba umsebenzisi ajonge kakhulu ekwandiseni ixesha Kuthatha ukufuduka kunye nokwenza lula yonke into kwimeko entsha yewebhu.
E gameni likaBentley, uPhil Christ Christen, i-Vice-Vice President wathi:
Abasebenzisi bethu kwizixeko ezininzi bacela amandla afunekayo okuba yintoni i-Agency9 ephumeze ngempumelelo kulo lonke elaseSweden, ukuba baxhamle kwiinkqubo zayo zokwenza imodeli yokwenyani. Ngapha koko, xa sidibanisa ubuchule bokufotokotshi be-XNUMX ConocolCapture -equka imifanekiso ehlambulukileyo efunyenwe ngamaqumrhu okuzimela-Ngobuchwephesha bethu beDatha (i-CDE) edityanisiweyo yetekhnoloji yokudityaniswa kwe-geospatial kwi-BIM, zenza iiWebhu eziDibeneyo zesixeko ngenkonzo yefu efanelekileyo.
Ubunyani kunye 'nokubonakala' kweSixeko sasePlanner kubonelela ngesisombululo esifanelekileyo sewebhu ukuvumela ulwazi luguqulwe kwaye lugcinwe ngendlela elawulwayo nechanekileyo.
Halala abasebenzisi MicroStation, ngubani na lindela geospatial functionality entsha kufundwe amashishini AECO nkqo ezisebenzayo kwi ProjectWise kunye AssetWise.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iikhono zoNjineli woLuntu kufuneka zizuze kumnikazi wokwakha
Post Next Ukuguqulwa kweCadastre e-Multi-Land ukwenzela uphuhliso oluzinzileyo eLatin AmericaOkulandelayo »